Izinkinga umsebenzi amapayipi endlini lapho kaningi. Lo mkhuba ezivamile esibangela ukungakhululeki abahlali, kuyinto ukuvela umsindo ezingemnandi ohlelweni. Ake sibheke ukuthi kungani kuyachwaza amapayipi amanzi lapho empompini ivuliwe?
Engesiyo izakhi ukufakwa ohlelweni
Kungani kuyachwaza Thepha izikhathi eziningana ngosuku? Ngalokhu nokucabanga kungaholela Plumbers iphutha uma ufaka noma egijima amanzi teluhlaka ukulungisa. Uma kukhona imisindo ezingemnandi ngemuva Mechanics odongeni namandla ngubani serviced omakhelwane babo uhlelo, hhayi ezinabantu ixhunyiwe noma amapayipi kahle ukushisa namakhaza. Ukuze ukuthola ngokunembile ukuthi kampompi kungani engakunaki nokubhuza ukuqala kuyinto ukwehlela egumbini futhi uhlole ukuthi ngokuqinile usufikile lapha Elements yamanzi ipayipi. Ukwenza isiqiniseko sokuthi yonke into ukuze, kubalulekile ukuze ujike komakhelwane babo futhi ndawonye ukuthola izinga ngokwanele ipayipi isilungisiwe. Ukuyeka le nemiphumela ethile engathandeki yokumiswa emhlabeni yesikhuphukeli, ungakwazi bayakhohlwa inkinga phakade.
Budebuduze naleli amapayipi
Kungani humming ipayipi, lapho uvula valve? Ngokuvamile, into enjalo is nasemkhakheni ezimweni lapho izakhi amapayipi nabo ngqo nomunye. Ukuxazulula lenkinga kumele ubukeke amashubhu eduze zishiyane. Uma-ke noma okunzima ukushintsha ukucushwa zabo, ngokwanele ukuba bopha ngamunye isici conductive yamanzi polyvinyl ekhethekile chloride nangokuvikela nesembozo, ezingasetshenziswa ithengwe ngasiphi amapayipi esitolo.
ingcindezi ngokweqile ohlelweni
Kungani ukudlidliza lapho uvula empompini? Ukuze lokhu kungaholela khona ingcindezi ngokweqile ohlelweni namanzi. Chaza inkinga kungenziwa kakhulu wavula empompini. Uma notshwala amanzi liphindelela uhoxile emgodini ke enkingeni amanga ngokunembile kuleli.
Ngokweqile ingcindezi izinga ohlelweni amanzi ipayipi kungenzeka ziholele depressurization izakhi ezithile kwesakhiwo kanye nezindlu enezikhukhula. Ukuze kuncishiswe umthwalo phezu tube futhi asuse umsindo ecasulayo, kungcono baphendukela ukufakwa indawana ekhethekile womoya. Lesi sakamuva igibele esikhundleni mixer ne uxhumano ipayipi futhi eqala overpressure.
Ekugcineni, qiniseka ukuthi kukhona imbangela hum futhi buzz ohlelweni kuzovumela ikholi plumber abayoba kutholakale izinga ingcindezi ohlelweni amanzi. Izinga evamile ukuba alingane 2 eziphindwe. Kulokhu, ompompi, Umshini wokuwasha izitsha kanye umshini wokuwasha ngeke wadalula wethonya elonakalisayo. Uma ingcindezi uhlelo 6 ibha, nokuningi, lokhu ithuba ubheke isikhalo wesevisi.
a Ngenisani ngokudlulisa ngendlela ipayipi
Kungani kuyachwaza umphini uma uvaliwe? Lokhu kungababangela odla izindlela kokuqhuba amanzi ohlelweni. Lolu ketshezi elihlala amaphayiphi sicindezelekile, ngisho nalapho valve ivaliwe, sidlula izindawo uphawu, ibangela umsindo kunalokho edabukisayo.
Ukunciphisa ubukhulu engaphakathi amashubhu is ngaphansi kwencazelo "iphayiphi esivimba amanzi" ezaziwayo. Kukhona ngumkhuba izindlu osekuyisikhathi eside yenziwa yesondlo noma ulungise okumelwe kulungiswe amasistimu dolobha zobunjiniyela. Ngaphakathi tube yene nokugqwala nosawoti aqoqana lapha zonke izinhlobo udoti. Nasezimweni ezinzima kunazo zonke yokuxazulula inkinga aye ayisebenzisa kaningi kokufaka amapayipi metal entsha noma ukufakwa compounds plastic.
Indlela ukunquma ukuthi iyini imbangela umsindo ungakhululekile itholakala ebukhoneni okuvimba amapayipi? Ukuxilonga ukuvaleka, kubalulekile ukuba ahlukanisa yisiphi isigaba amanzi ipayipi futhi ufunde ngaphakathi. Ukuba khona-plaque futhi enenhlabathi ezindongeni amashubhu ukuqinisekisa izibikezelo.
Ukuphungula odla ku amashubhu kungaba futhi esebenza ngemishini noma ngamanzi wokubacindezela. Esimweni sokuqala kuba ezishaywayo ne ndawo inkinga bese usebenzisa wire awugqinsi, ekupheleni okuyinto eqondiswa ibhulashi metal. Ukuze ngamanzi wokubacindezela izinhlelo iphendukele ukusetshenziswa kwegazi futha enamandla, elikwaziyo ngokushesha ngixosha amanzi ngokusebenzisa amapayipi ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu.
Old, amapayipi ezilimele
Kungani kuyachwaza isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu? Ngu nesenzakalo njalo imisindo ezingemnandi ebukhoneni ezingeni kahle ingcindezi ohlelweni kanye nokusebenza mixer kungaholela lokuphelelwa yisikhathi serviceable wonke amapayipi. Isixazululo elilungile zokunqanda isicefe iwukuba esikhundleni ibuthuntu, avuzayo tigaba amapayipi amasha. Nokho, kwezinye izimo eziningi, le ndlela akusho aluqede ngokuphelele le nkinga. Kulesi simo, VO uthatha lenkhulu ipayipi yesikhuphukeli. Ukuze banciphise izindleko, kuwufanele lizosizana omakhelwane.
Ukulimala ulwelwesi lwesisu, kwenze mixer
Manje sibheke izizathu ezijwayeleke kakhulu kungani kuyachwaza crane. Inkinga esivame kakhulu khona yokulimala ulwelwesi lwesisu, kwenze mixer. Lesi sakamuva singabangela igqoke ngokungalungile efakwe noma engaphelele.
Ukuxazulula lenkinga, landela lezi zinyathelo:
isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu alternately evulekile for bamanzi ashisayo nabandayo. Lokhu kuzoveza kahle lapho gasket lilimele.
Vala amanzi efulethini.
Ahlukanisa mixer ukususa gasket lilimele.
Thenga esitolo sezinto zokwakha umklamo element omusha futhi wenze ukufakwa kwalo.
Hlanganisa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, vula amanzi futhi uhlole ukuze ubone ukuthi ingabe i-buzz wanyamalala ngesikhathi kampompi.
okuthembekile insufficiently yasibamba hoses ngoba usinika amanzi
Kungani kuyachwaza isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ekhishini? Ukuze uthole imbangela, kubalulekile ukuhlola amapayipi amanzi, okuyinto yanikezwa mixer ngaphansi echibini. Kulokhu-ke kuyadingeka ukuvula valve amanzi yanjalo ashisayo nabandayo. Nquma ukuthi iziphi amapayipi amanzi kubangela i-buzz, udinga ukufaka isandla sakhe noma ukwehlukanisa compounds ngamathuluzi.
Eziningi zanamuhla olulodwa-isigwedlo labathaki bamafutha zimumethe a igobolondo, okuyinto unomthwalo ukusatshalaliswa kwamanzi notshwala. Kungenzeka ukuthi imbangela umsindo ezingemnandi ohlelweni amanzi itholakala umonakalo zayo.
Ukuze wenze igobolondo esikhundleni, udinga amathuluzi ezilandelayo:
ummese ngensingo mncane;
Ngaphambi kokwenza izinqubo yesondlo, kufanele anqunywe yamanzi efulethini. Khona-ke kulandela inkinobho hook usebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela, okhombisa lapho eceleni ngamanzi abandayo futhi kushisa. Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba uyasikrufulula screw igobolondo emvula nge iheksagoni. Ekugcineni, usebenzisa i ukusonta adjustable, uyasikrufulula nut clamping futhi asuse ukumelwa timphawu design.
Thatha igobolondo efana ezikhona, kungaba esitolo sezinto zokwakha. Emva kokuqeda i-ukuthenga, uhlelo kuyomane kwenze inhlangano in the oda reverse nalobo ukusetshenziswa amathuluzi ngenhla.
Avuzayo hose ngigeza
Kungani kuyachwaza kampompi yokugezela? Enye yezimbangela ezivame lokhu mkhuba ukuba khona ukuvuza hose, okuyinto ixhunywe sokugeza.
Ukuxazulula le nkinga kwasekuqaleni kuwufanele kokuhlola sanoma yikuphi ukulimala zonke yokudayela efanayo. Uma isizathu itholakala isidingo ukumisa omunye esikhundleni sabo.
Ngezinye izikhathi kudala imisindo ezingemnandi lapho amanzi izimbangela eshaweni hose igebe, okungukuthi kwangaphakathi iraba tube ukuthi itholakala phakathi emikhonweni metal. Ukubhekana inkathazo, kubalulekile bonyana batshidze isichibi imbobo. Nokho, labo ungafuni umthwalo ngokwabo nge umsebenzi owengeziwe, kungcono Yiqiniso, ukuthenga futhi ufake ipayipi lamanzi amasha.
Esihlokweni samanje, sibuyekeze izizathu ezivamile ezibangela nokububula, amakhwela, nezinye imisindo ezingemnandi ohlelweni amanzi. Lezi zindlela ukuxazulula izinkinga ngabanye uyoqeda ubuhlungu ngokwakho.
Nokho, koSanta ukuze amapayipi ukulungisa Kunconywa kuphela labo asebamukele ukuba babe nakho komsebenzi ngendlela efanayo. Ngempela, izenzo ezingabonisi ukucabangela kungathinta ukusebenza lonke amanzi supply system. Uma wenza ukulungiswa esingafanele singakheka nje kube ukuvuza kwamanzi, kodwa futhi kudalwa eziphuthumayo ezinkulu. Ngakho-ke, kwezinye izimo, ukuqeda umsindo ezingemnandi ku isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu noma izakhi amapayipi uhlelo kwadingeka kuqashwe amasevisi abaculi professional.
Indlela ukusula ukuvaleka egumbini lokugezela: iseluleko esisebenzayo
Ukucwila ngoba umshini wokuwasha nge top: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo yokuxuba
Kwesikrini nganoma yokugezela - isixazululo yesimanje futhi zisebenza
Ukumelana ngokulinganisa: ifomula ukubala
Veronica spicata (spikelet): incazelo, betshala, ukunakekelwa, lisetshenziswe abantu imithi
Yokutakula Fast emva ukuqeqeshwa: umsebenzi, ukudla kanye nezincomo
Indlela Khulisa truffle: mycelium, inhlabathi ubuchwepheshe. Lapho truffle zikhule
Heroine yochungechunge "Skins" Casey
Ukuwafaka ukhukhamba ubusika
Elwa ezibanzi-bohlu. Antimicrobial zabesifazane
Panasonic ES-LF51 - wethuka woma kagesi, eyeqa okulindele!
School uwayehlalise. Ukulungiselela semolina
Ukuphonsa amabhomu: inqubo nemithetho
I Uhlolojikelele best of the BMW 750
Okuzenzakalelayo ukwahlulela kutinchubo civil. Civil Inqubo Ikhodi (CPC RF)